Wararkii ugu dambeeyay Halka uu marayo howlaha magacaabista Golaha Wasiirada – Xeernews24
Wararkii ugu dambeeyay Halka uu marayo howlaha magacaabista Golaha Wasiirada
8. März 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku guda jira wada tashiyo dheeraad ah oo ku aadan magacaabista Golaha Wasiirada, iyadoo ay isa soo tarayaan caqabado lagala kulmayo xilalka Wasaarado muhiim ah oo beelaha qaar isku heystaan.
Inkastoo markii hore ay jireen hadal heyn ku aadan in liisaska Golaha Wasiirada ay yihiin kuwo diyaarsan, ayna suura gal tahay in waqtiyada soo socda lagu dhawaaqo ayaa waxaa soo baxaya dib u dhacyo arrintan ku aadan.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa tan iyo xalay waxaa uu kulamo la lahaa beelaha qaar, isagoo ka dhaadhicinaya sidii ay ugu qanci lahaayeen Wasiirada uu soo dhisi doono.
Wararka qaar ayaa sheegaya in caqabada ugu weyn uu haatan Ra’iisul Wasaaruhu kala kulmayo Beelaha Hawiye, gaar ahaan cida qaadan doonta Wasiirka ugu muhiimsan.
Ilo wareed ku dhow dhow Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegaya in la wado qorshe ah in mid ka mid ah beelaha Hawiye, Wasiir darajadiisa hoosey iyo Ra’iisul Wasaare kuxigeen la isugu daro, si loo qanciyo, halka Wasiirka muhiimka ee la siiyo Beel kale.
Arrintan ayaa la sheegay inay noqotay tan keentay in wada tashiyo dheeraad loogu baahdo, si beelaha loo qanciyo, waxaa lagu wadaa in caawa la dhameeyo waxyaabaha yar yar.
Liisas suuqa soo galay oo ka mid ah xubnaha Golaha Wasiirada ayaa soo baxday, inkastoo aan lagu kalsoonaan karin dhab ahaanshahooda.
Waxaa jira dad badan oo CV-gooda ama taariikhdooda u gudbiyay Ra’iisul Wasaaraha, waxaana la sheegayaa inay dadkaas gaarayaan boqolaal ruux.
Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha ayay adag tahay in xogtooda la ogaado, waxaana jira shaqsiyaad kala duwan oo ay si hoose u wataan, kuwaasoo suura gal ah in lagu baraarugo marka lagu dhawaaqo magacyadooda.
Si kastaba ha ahaatee Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa wajahaya imtixaankiisa koowaad, waxaana caqabada ugu badan uga imaanaya Beeshiisa, sida uu xilalka qaar ugu qancin doono.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/saddexda-200x112.jpg 112 200 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-08 13:59:312017-03-08 13:59:31Wararkii ugu dambeeyay Halka uu marayo howlaha magacaabista Golaha Wasiirada
Shirkadda NIKE oo soo bandhigtay xijaab dumarka ciyaartooyda Muslimka loogu... Saraakiil tababbar ku soo qaatay dalka Jabuuti oo Muqdisho lagu soo dhaweeyay...